Olee otú labeelu MP3 faịlụ gị Big Music gbasara mkpokọta
Olee otú labeelu MP3 faịlụ gị Big Music gbasara mkpokọta Mfe
> Resource> MP3> Olee otú iji labeelu MP3 faịlụ gị Big Music gbasara mkpokọta Mfe
"Gịnị ka m na-eji ịkpọ mp3 songs? M nwere ụyọkọ mp3 songs na kọmputa m na ha na-adịghị aha ha kpọrọ, ya mere m na-amaghị ihe song bụ gwụla ma m na-emeghe ya elu ma na-egwu ya. Bụ n'ebe a na omume nke ga-akpaghị aka labeelu ma na-enye ha aha? Ekele. "
Mark44 jụrụ ajụjụ a na a Forum. Nnọọ ka ya, ọtụtụ n'ime unu na ike okosobode otu nsogbu. Ọ dịghị-echegbu onwe mgbe niile. Ebe a bụ Wondershare TidyMyMusic maka Mac (Wondershare TidyMyMusic) inyere gị aka ziri ezi tracks ozi maka gị nnukwu music n'ọbá akwụkwọ na-akpaghị aka na-adị mfe. Chọrọ nwere a na-agbalị ugbu a? Ka nwere a ngwa ngwa anya na otú iji ya n'okpuru.
1 Mbubata music n'ọbá akwụkwọ a usoro
Download TidyMyMusic na ẹkedori ya mgbe nwụnye. Mgbe ahụ, ọ ga-akpaghị aka iṅomi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ma tinye niile MP3 faịlụ na faịlụ tree n'okpuru idozi iTunes.
Rịba ama: Ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ songs bụghị jisiri site iTunes, na-aga idozi Music na ịdọrọ ndị music nchekwa ozugbo na faịlụ tree ma ọ bụ pịa Open File bọtịnụ.
2 Label MP3 faịlụ na ogbe
Chọta a iṅomi bọtịnụ na nkụnye eji isi mee na tinye akara checkbox nke Chọọ maka unidentified Songs. Wee pịa iṅomi bọtịnụ na a usoro ga-amalite chọta kpọọ ihe niile na-MP3 faịlụ. The hụrụ ozi na-agụnye track aha, album nkọwa, album na nkà na ọbụna lyrics.
3 Mee hụrụ ọmụma ka ọ bụla song
Mgbe niile ozi chọpụtara, i kwesịrị embed ya n'ime bụla song mere na ị pụrụ nyefee ọmụma ọ bụla. Họrọ otu song na ị ga-ahụ ya ọmụma na nri n'igbe. Pịa Mee ka embed ozi ahụ iji onye ọ bụla song. Ị nwere ike họrọ ọtụtụ songs na esepu ma na-etinye n'otu oge.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye ụfọdụ ozi na songs, ị nwere ike idezi site onwe gị. Dị pịa Dezie na akara ngosi na mgbe ahụ jupụta na onye ọ bụla na-edezi ubi.
Nke a pụrụ ịbụ kacha ụzọ tinye music kpọọ ka a ọtụtụ buru ibu nke songs. TidyMyMusic maka Mac bụ ezigbo ngwá ọrụ iji nyere ọcha gị music n'ọbá akwụkwọ kwa. Ọ bụrụ na ị tinye akara checkbox nke Chọọ maka duplicated Songs na pịa iṅomi button, a usoro pụrụ inyere gị aka ịchọpụta duplicated songs n'ihi na ị na-ewepụ ka ahịhịa. Ihe bụ ihe ọzọ, i nwere ike abụọ-pịa thumbnail nke songs na-egwu. Azụ ọzọ. Get a niile-na-otu ngwá ọrụ na isi na n'ihi na a ohuru music ahụmahụ.
Ekiri a video nkuzi n'okpuru:
MP3 Roket Alternative: Download Online Video mma karịa MP3 Roket
Olee otú iji tọghata m2ts ka mp3 na Windows na Mac
Best MP3 Tagger maka Windows Mac OS Linux
Olee otú Easily Tinye Image niile gị na MP3 Files